Dastabej » कुनै पनि टोल विकासबाट बन्चित छैनः नेपालगन्ज १ का वडाध्यक्ष रिजाल
कुनै पनि टोल विकासबाट बन्चित छैनः नेपालगन्ज १ का वडाध्यक्ष रिजाल – Dastabej
कुनै पनि टोल विकासबाट बन्चित छैनः नेपालगन्ज १ का वडाध्यक्ष रिजाल
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको ५ बर्षे कार्यकालमध्ये ४ बर्ष पुरा गरिसकेकाछन् । अब एक बर्ष मात्रै बाँकी छ । अन्तिम बर्षको बजेट पनि निर्माण गरिसकेका छन् । अब जनप्रतिनिधिहरुको कामको मूल्याङ्कन गर्ने मात्र होइन परिणाम देखिनु पर्ने बेला पनि हो । जनप्रतिनिधिलाई हामीले पाँच प्रश्न मार्पmत उनीहरुले गरेको काम, भोगेको चुनौती र अनुभवलाई समेट्ने गरेका छौ । पाँच प्रश्न श्रृङ्खलामा मतदाता माझ उनीहरुले गरेका प्रतिबद्धताको स्मरण गराउने र बाँकी समयमा ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रेरित गर्न सघाउने उद्देश्य पनि हो । आजको श्रृङ्खलामा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १ का वडाअध्यक्ष प्रमोद रिजालसंग शम्भु थारुले गरेको अन्तरसंबाद ।
तपाई देखिने गरी अहिले सम्म के के काम गर्नु भयो ?
तीन चार वटा कामहरु हामीले सम्पन्न गर्न सफल भएका छौ । बिशेषता वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी सहितको २ तल्ले भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । बिगतमा वडा कार्यालयको भवन नहुदां सारेको सारै गर्नु परेको थियो । अहिले स्वास्थ्य चौकी सहितको २ तल्ले भवन भएपछि स्थानीयलाई सेवा लिन र सेवा प्रवाह गर्न सहज भएको छ । वडालाई खेलकुदको हवको रुपमा बिकास गर्नका लागि खेलकुद एकेडेमी निर्माण भएको छ । त्यहाँ वास्केटबल, लंग टेनिस, सफ्ट टेनिस, क्रिकेटको ट्रेनिङ र फुटबल एकडेमीको रुपमा होस्टेल र अफिस सहितको स्थापना गरेका छौ । त्यसैगरी व्यडमिन्टन कोर्ड निर्माण कार्य भैरहेको छ । ओपन जिमहरु संन्चालन भएको छ । खेलकुदको हवको रुपमा बिकास गर्नका लागि सबैखाले खेलकुद संन्चालन गर्न सकिने गरी तयारी गर्न थालेका छौँ । हामी यो खेलकुदको क्षेत्रलाई अगाडी बढाउने कुरामा सफल हुन्छौ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसपछि हामीले चुनवमा प्रतिबद्धता गरेको बाटोहरु, प्रत्येक टोलमा पिच पुर्याउने अभियान सहित कालोपटे सम्पन्न गर्न गैरहेकाछौ । अहिले सम्म ८÷१० किलोमिटर पिच, ग्रभेल, नालाहरु, पिसिसि ढलानहरु, थुप्रै पिसिसि ढलानहरु भएकाछन् । कुनै पनि टोल यो बिकासबाट बन्चित हुनुपरेको छैन । बिशेषगरी अब यो नयाँ टोलहरुमा थुप्रै घरहरु बनेकाछन् । जहाँ हाम्रो यो अन्तिम बर्षमा कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको छ । बिशेषगरी जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्न र पारर्दर्शीताको क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दै आएका छौ ।
काम त कस्तो हुदो रहेछ भने एउटै अवधिक चुनावमा सम्पुर्ण बिकास हुनेगरी बजेटहरु बिनियोजन भएको हुदैन ।त्यसकारणले गर्दा आर्को पटकको चुनावको अवधारण आउने हो । तर पनि हामीले प्रतिबद्धता गरे अनुसार धेरै जसो बाटोघाटोहरु निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ । त्यसपछि आएर खेलकुदको क्षेत्रमा अगाडि बढेको कुराहरु गरे मैले । त्यसपछि सरसफाई र हरियालीलाई अत्यन्तै महत्वपुर्णका साथ ध्यान दिएर काम गरिरहेकाछौ । बिशेषगरी रोडको दुबै क्षेउमा गमलामा बिरुवा लगाउने कुराहरु र आफ्नै ट्रेक्टर खरिद गरेर घरघरबाट फोहर उठाएर सम्बन्धित ठाउँमा बिर्सजन गर्ने कुराहरु यी सबै कुराहरुलाई महात्व दिएर काम गरिरहेकाछौ । अझै पनि हाम्रो बिशेष पहल भनेको जनतालाई सहज र सरल तरिकाले देली वैजेजका सेवाहरु प्रदान गर्ने, पारर्दर्शीरुपले काम गर्ने र फेरी पनि हामीले कालोपत्रे बाटोलाई नै प्रथामिकता राखेर काम गरिरहेका छौ । र बालबालिका, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि अत्यन्तै महात्वपुर्ण कामको रुपमा अगाडि बढायौ । अझै पनि हामीले स्वास्थ्य शिक्षा, महिला तथा अपाङ्ग, एकलमहिला लगायतको उत्थानका लागि अत्मा निर्भर बनाउन सिप सिकाउने कुरा देखि लिएर त्यो कुरामा हामीले बढी जोड दिइरहेका छौ । र संगै बाटोघाटोको बिकासलाई पनि जोडेर अगाडि बढिरहेका छौँ ।
नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई बढी सहयोग गर्दरहेछन् कि बढि आलोचना ?
यस्तो छ । हाम्रो वडाको कुरा गर्ने हो भने हामी जनतासंग प्रत्यक्ष फेस गरेर काम गर्छाै । मैले अगाडि पनि सुशासनको कुरा गरे । सुशासनको क्षेत्रमा यो वडा र वडा अध्यक्षलाई आमेरिकन एमबेशी र आर्थिक पत्रकार समुह सेजनले अवार्ड गरेको छ । हामीले सुरुबाटै पहिलो बर्षदेखि चौथो बर्षसम्म सर्बजनिक सुनवाई गर्ने यो पहिलो वडा हो । यो धेरैले गरेकाछैनन् । हामीले गरेपछि उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको हो । त्यो हिसाबले हामीले परर्दर्शीताको क्षेत्रमा जनतासंग प्रत्यक्ष भेट्ने, वहाँहरु संग बिभिन्न खाले योजनाका बिषयमा छलफल गर्ने, वहाँहरुले ल्याएको योजनालाई छानोट गरेर राख्ने र पटक पटक वहाँहरुसंग हाम्रो संबाद भैराख्ने कारणले गर्दाखेरी एकदमै सहयोग गर्नु भाको छ । यहाँको सम्पुर्ण जनताले बिकासमा सहयोग गरेका कारणले गर्दा हामीले थुप्रै बिकासमा फड्को मार्न सकेको कुरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु । र अगामि दिनमा पनि यहाँका जनतालाई बिकासको काममा सहयोग गर्ने आपेक्षा पनि मैले लिएको छु । गुनासो चाँही रहन्छ । अब यो ५ बर्षे बिकास गर्ने क्रममा अवश्यकतालाई हेरेर एकठाउँबाट गरिन्छ । पहिला उतातिरबाट सुरु गर्यो हाम्रो तिरबाट गरेको भए हुन्थ्यो । उतातिर बन्यो हाम्रोतिर कहिले बन्ने भन्ने अलिकति धेर्यताको कुरा हुन्छ । तर पनि यहाँका जनताले धेर्य भएर हाम्रो ५ बर्ष बिकासलाई हेरिदिनुभएको छ र हामीले प्रत्येक टोलमा बिकास पुर्याउने प्रयास गरिरहेकाछौ । पुग्छौ र सफल पनि हुन्छौ ।
निर्वाचनको बेलामा प्रतिबद्धता जनाएको तर अहिले सम्म पुरा गर्न नसकेको काम के छ ?
सतप्रतिशत काम पुरा हुन त यो ५ बर्ष सम्भव थिएन । त्यर्ही भएर मेरो जनताप्रति अनुरोध के छ भने धेर्यता राख्ने हो भने बिकास नपुगेको ठाउँमा बिकास पुग्छ । बिशेषगरी अहिले नयाँ बस्तीहरु थुप्रै बसे त्यहाँ थुप्रै घरहरु बने, त्यहाँ बाटो पुर्याउनु पर्ने अवश्यकता छ । त्यो थप नयाँ बस्ती बसेको हुनले समस्या भएको हो । अझै पनि हामीले खेलकुदको हव बनाउने कुरा त्यो क्षेत्रमा लागि रहेकाछौँ र संगसंगै बाटोघाटो बिकास, समाजिक बिकास, संस्कृतिक बिकास बिशेषगरी यहाँ चाही मठमन्दिर अत्यन्तै छन् । मठमन्दिरको संरक्षण र जिर्णेद्धर गर्ने काम गरिरहेकाछौँ यीनै कामहरुलाई हामीले बिकासमा जोडेर बिकास भनेको बाटोघाटो मात्रै नभएर आर्थिक, समाजिक, संस्कृति, सचेतनाका कुराहरु, शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरुलाई यो वडाबाटै सबै सेवासुबिधा पाउनेगरी एउटा गुरु योजना बनाएर अगाडी बढ्ने काम अझै बाँकी रहेको देख्न सकिन्छ ।
त्यासो भए जनप्रतिनिधिको जिम्मेबारी निभाउँदाको चुनौती के रहेछ ?
अत्यन्तै चुनौती छ । जहाँ चुनौती छ त्यहाँ अबसरहरु पनि हुन्छ भन्छन् । जनताको सेवा गर्ने काम आफैमा मा चुनौतीपुर्ण हुन्छ नै । तर त्यसले आत्मा सन्तुष्टि पनि हुन्छ । मैले बिहानदेखि बेलुकैसम्म जनताको सानो काम गर्न सके भने एकदमै सन्तुष्ट हुन्छ । तनाव चाही रहन्छ बिहान देखि बेलुकासम्म खट्न पर्छ । कतिपय आफ्नो व्यक्तिगत काम पनि गर्न नसकेको अवस्थाहरु हुन्छ । घरपरिवारलाई टाइमै दिन्न भनेर गुनासो परिवारको पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चाही बिहान देखि बेलुकैसम्म बिभिन्न झगडाका केशहरु मिलाउने कुराहरु, जग्गा मिचेको कुराहरु, बाटो बन्द गरिदिएको कुराकाहरु, परिवारिक झगडाका कुराहरु यस्ताखाले केशहरुले तनाव दिन्छ । जसले गर्दा बिकास निर्माणको काम गर्दा एकरुपत गरेर गर्ने कुरामा एकाग्रता भंग हुने कुराहरु हुन्छ, तर पनि मैले त्यसलाई चुनौती भन्दा पनि अबसरको रुपमा लिएर जनताको सेवा गर्न जनप्रतिनिधि बनाएर पठाएको हुनले वहाँहरुको कुनै पनि समस्या सम्बोधन गर्ने हाम्रो दायित्व हो, कर्तव्य हो भनेर सहजताका साथ अगाडि बढेको कुरा छ, यद्दपी चुनौती रहन्छ । टाइम म्यानेज गर्न, व्यवस्थापन गर्न अलिकति चुनौती त रहन्छ ।
१७ श्रावण २०७८, आईतवार १३:१२ प्रकाशित